OTU ESI MALITEGHARỊA EKWENTỊ WINDOWS 8 - WINDOWS - 2019
Ọ ga - adị ka ọ dị mfe karịa ịmalitegharịa usoro ahụ. Mana n'ihi na Windows 8 nwere interface ọhụrụ - Metro - maka ọtụtụ ndị ọrụ a na-eweta ajụjụ. E kwuwerị, na ebe ọ dị na menu "Malite" enweghị bọtịnụ mmechi. N'okwu anyị, anyị ga-atụle ọtụtụ ụzọ ị nwere ike isi Malitegharịa ekwentị gị.
Otu esi emegharia Windows 8
Na OS a, a na-echekwa bọtịnụ ike, nke mere na ọtụtụ ndị ọrụ mgbagwoju anya na usoro a siri ike. Ighachị usoro ahụ dị mfe, ma ọ bụrụ na ị zutere Windows 8, ọ nwere ike iwe oge. Ya mere, iji chekwaa oge gị, anyị ga-agwa gị otu esi esi ngwa ngwa ma malitegharịa usoro ahụ.
Nzọụkwụ 1: Jiri mpaghara ebere
Ụzọ kacha pụta ìhè ịmalitegharịa PC bụ iji bọtịnụ na-echepụta mmapụta (panel "Charms"). Kpọọ ya na isi nchikota Na-emeri + m. Otu panel nwere aha ga-apụta na nri. "Nhọrọ"ebe ị na-ahụ bọtịnụ ike. Pịa na ya - menu ga - apụta, nke ga - enwe ihe dị mkpa - "Reboot".
I nwekwara ike iji amara a maara nke ọma. Alt + F4. Ọ bụrụ na ị pịa igodo ndị a na desktọọpụ, igodo nchịkọta PC gosipụtara. Họrọ ihe "Reboot" na ndetu menu ma pịa "OK".
Usoro 3: Nchọta Win + X
Ụzọ ọzọ bụ iji menu nke ị nwere ike ịkpọ ngwá ọrụ kachasị mkpa maka ịrụ ọrụ na usoro ahụ. Ị nwere ike ịkpọ ya na nchikota Nweta X. N'ebe a ị ga-achọta ọtụtụ ngwaọrụ anakọtara n'otu ebe, ma chọpụta ihe ahụ "Kwụsị ma ọ bụ pụta". Pịa na ya wee họrọ ọrụ achọrọ na menupụtapụta.
Nzọụkwụ 4: Site na nchọta mkpọchi
Ọ bụghị usoro kachasị ewu ewu, ma ọ nwere ebe ọ ga-adị. Na ihuenyo mkpọchi, ịnwekwara ike ịchọta bọtịnụ njikwa ma malitegharịa kọmputa ahụ. Naanị pịa ya na ala aka nri ala ma họrọ ihe omume achọrọ site na menupụtapụta.
Ugbu a ị maara ma ọ dịkarịa ala ụzọ anọ ịmalitegharịa usoro ahụ. Usoro niile a na-atụle dị mfe ma dị mfe, ị nwere ike iji ha na ọnọdụ dị iche iche. Anyị na-atụ anya na ị mụtara ihe ọhụrụ site na isiokwu a na ntakịrị nghọta ndị ọzọ metro UI interface.